crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Hadafka Dowladnimada!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Faallooyinka August 5, 2015	0 396 Views
Muqdisho (Himilonews) – “Hadafka ugu weyn ee dowladi u jirtaa waa u raaxaynta dadkeeda iyo inay ku kaalmeyso sidii dadkeedu u hanan lahaayeen liibaan waarta.” Tomas Jefferson oo kamid ahaa madax-weynayaashii ugu horreeyey ee Maraykanka ayaa ku sheegay mid kamid ah qudbadihii uu kaga hadlayay waxa dowladi dadkeeda u tahay.
Waa maxay dowladi?!
“Dowlad la’aan nooluhu ma lado. Dowladu waa tan horseedda xeerarka nolosha iyo jiheynta dhabta ah ee jiritaanka mujtamaca”. Zakariya Hassan “Hiraal”
Dowladdu waa udub-dhaxaadka nolosha Aadmiga nool jeer kasta. Waa hoggaanka koobaad ee haga bulsho kasta. Waa isha koobaad ee maaxata dhadhanka runta ah ee nolosha. Dowlad la’aan nooluhu ma lado. Dowladu waa tan horseedda xeerarka nolosha iyo jiheynta dhabta ah ee jiritaanka mujtamaca.
Si guud marka noolaha loo eego, waxaa jira waxyaabo lagu sheegi karo nidaam dowladeed ay ku dhaqmaan. Qiyaas marka noole cayayaan ahi leeyahay kala danbeyn iyo midnimo. Bal eeg Shinnida ama Quraanjada oo ah tusaalaha ugu yar noolaha jira. Mise kula tahay inay xeerba aqoon?! Bal ii sheeg marka shinbiruhu wadajir u wada duulaan. Ma kula tahay inaysan awoodin inay kali-kali u duulaan?! Maxaa u diidi kara kali-kali-u-duulista?! Ma kula tahay inaad malab muudsan lahayd haddii mdnimo iyo kala danbeyn la’aan Shinnidu ahaan lahayd?! Mise waxaa jira il-qabowsi laga heli karo shinbiro aan ku duulayn jawi dagan iyo nagaadi?! Kuwani waa tusaale yar. Marka aadse si qoto dheer ugu fiirsato, waxaa kuusoo baxaya in noole kasta oo jira uu yahay mid uun iyo arin gaar ah ku sargo’an.
Bilowgii hore ee nolosha San-ku-neeflaha, wixii ugu horreeyey ee ina-Aadam lagu amray waxay ahayd inuu sugo kala danbeynta iyo in mid laga noqdo dhagarta Ibliiska. Tani waxay ina tusaysaa in helidda nidaam wax hoggaansha ay lama huraan u tahay sanku-neeflaha. Waa waxa horseeda ama hayaamiya ilbaxnimada. Dalba inta uu dal kale ka daganaan, midnimo iyo kala-danbeyn roon yahay ayuu ugasii horreeyaa hanashada baraaraha iyo hiigsiga ilbaxnimo.
Bal qof kasta oo Soomaali ah naftiisa ha su’aalo: maxaad u tahay dowladnimada? Maxayse dowladnimadu kuu tahay?! Ma iyadaa looga fadhiyaa inay liibaan kuu horseeddo?! Mise adigaa lagaaga fadhiyaa inaad ku kaalmayso sidii ay liibaan kuugu horseedi lahayd?!
Gabagabadii markaan is-dultaagno hadalka Tomas Jefferson—nin walbow eeg xukuumadaada—oo u sheeg Himilonews.com in dowladaadu ku taagan tahay dhabaha uu tilmaamay Tomas Jefferson oo aad ku garab-taagan tahay hiigsigeeda ku aadan liibaantaada iyo inay kale!
Previous: 10–siyaalood oo Saaxiibku kuugu wanaagsan yahay!!
Daawo sawiradda; Jidka dheer ee gala Madaxtooyada Dalka